खुसी हुन चाहनुहुन्छ ? ध्यान गर्नुहोस्, अपनाउनुहोस् यी उपाय ! - The First Nepali Digital Newspaper from Australia (Ausnepal news)
प्रकाशित मिति: २६ चैत्र २०७५, मंगलवार April 9, 2019
काठमाडौं । यदि तपाईं खुसी हुनुहुन्न भने पनि चिन्ता नगर्नुहोस् किनभने खुसी कसरी हुने भन्ने तपाईँ सिक्न सक्नुहुन्छ। जसरी संगीतकर्मी र खेलाडीले निरन्तरको प्रयासले आफूलाई प्रशिक्षित गर्छन्, कमजोरी सुधार्छन् र सफल हुन्छन् त्यसरी नै तपाईँ पनि खुसी हुन सक्नु हुन्छ।